मजदू-रलाई छाक टा’र्न गा’ह्रो भन्छन्- ‘भारी बोक्दा प्र’हरीले भा’टा हान्छ, सर’कार हामी के गरी खाने ?’ – Yuwa Aawaj
जेठ ९, २०७८ आइतबार 425
काठमाडौ : कोरो’ना भाइर’सको दोस्रो एवं तेस्राे भेरियन्ट नेपालमा फैलि’एपछि अहिले मुलुकभरजसाे नि’षेधाज्ञा जारी छ । यस्ताे बेला सामान्य अवस्थामा पनि क’ष्टका साथ जीवन गुज’रा गर्नुपर्ने मजदुर तथा न्यून कमाइ हुने वर्गलाई
अहिले अत्य’न्तै सास्ती भइरहेको छ । विषे’शगरी शहरी क्षेत्रमा होटलमा काम गर्ने म’जदुर, कपडा डुलाउँदै बेच्नेहरू, फूटपा’थ व्यापारी, ज्या’लादारी श्रमिक, भारी बोकेर जीविको’पार्जन गर्दै आएका र निर्माण कार्यमा लागेका मजदु’रहरुले बढी सास्ती खे’पिरहनु परेको देखिन्छ ।
हो’टलमा काम गर्नेहरु हाेटल नै बन्द भएपछि बेराेजगार बसिरहने स्थिति पनि छैन । यसैगरी सडकको गल्ली-गल्ली’मा डुलाउँदै कपडा व्यापार गर्ने व्यपारीहरु पनि निषे’धाज्ञाले काम ठप्प भएपछि गु’जारा गर्न नै मुस्किल भएकाे बताउँछन् ।
उता भारी बोकेर जीवि’कोपार्जन गर्दै आएका मज’दुरहरु पनि बजार नै ब’न्द भएपछि भारी बोक्नै नपाएर बिहान-बेलुकाको छाक टा’र्न नसकि’रहेकाे बताउँछन् ।
उनीहरु आफ्नो जीविका चलाउनका लागि जुनै अवस्थाको काम गर्न तयार रहे पनि निषेधा’ज्ञाले गर्दा काम नै नपाएर समस्या उत्पन्न भइ’रहेको बताउछन् । काम नपाइने भनेर बसिरहँदा अफूसँगै परिवारलनई खानाको जोहो गर्न अ’सम्भव हुने बाध्यता उनीहरुलाई छ ।
हाेटलमा काम नभ’एपछि भारी बाेक्दै
सिन्धुलीका हर्क मगर कालिमाटि तर’कारी बजारमा भेटिए । उनी पेसाले कुक हुन् । तर उनी निषे’धाज्ञाका कारण होटलबाट निस्कन वि’वश भए । उनी आफ्नो परिवारको लागि बिहान-बेलुकाको छाक जोहो गर्नकै लागि कालिमा’टिमा भारी बोक्न बा’ध्य भएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘निषे’धाज्ञापछि होटलबाट निस्कि’नुपर्यो । दुःख भयो । बिहान-बेलुका खानै प’र्यो । घर परिवार भएको मान्छे म । कोठा भाडा ति’र्नै पर्यो । त्य’सैकारण म अचेल कालिमाटी तर’कारी बजारमा भारी बाेकेर गु’जारा गर्दै आएको छु ।’
कालि’माटीमा भारी बोक्ने काममा पनि व्यपारीदेखि मज’दुरी गर्ने सबैलाई समस्या भएको उनी बताउँछन् । भइरहेको पनि अब बन्द हुने भन्ने खबरले उनी थप चिन्तित छन् । यदि चलि’रहेकाे तरकारी बजार पनि बन्द भए के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने उनलाई पिरलो छ ।
उनी भन्छन्, ‘यहाँ व्या’पारी र मज’दुरी गर्ने दुवैलाई गा’ह्रो छ । अब यहाँ पनि शिल गर्ने कुरो छ । दुःख गरेर खान पनि हामीलाई गा’ह्रो भइ’रहेको छ । यहाँ बन्द भए कहाँ जाने, के गर्ने ?’
काम पाउनै गा’ह्राे
अर्का मज’दुर प्रेम सुन्दास । उनी धादिङबाट आएर करिब १५-२० वर्ष अघिदेखि कालि’माटीमा तरकारी बोकेर मज’दुरी गर्दै आएका थिए । अहिले नि’षेधाज्ञापछि काम अलिअलि मात्रै पाइर’हेकोले समस्या परेको बताउँछन् । पहिला दैनिक रुपमा हजारदेखि १२ सय कमाउने गरेको, तर अहिले दिउँसो’भरि गर्दा जसोतसो ३-४ सय कमाइ हुने उनले सुनाए ।
कालिमा’टीमा तरकारी व्यापारै न’भएपछि काम नपाएर परिवार धान्न गाह्रो परिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘घरमा आमाबुबा अनि परिवार हुनुहुन्छ । उहाँह’रूलाई पनि खुवाउनै पर्यो । आफूले मात्रै खाएर भएन । काम गर्छु भन्दा पनि हामीले पाइ’रहेका छैनौं ।’
त्यस्तै अर्का मज’दुर पनि उही दु’खेसो पोख्छन् । आफू १५ वर्षअघिबाट कालिमाटीमा तरकारी बोकेर मज’दुरी गर्दै आएको तर अहिले जस्तो समस्या कहिल्यै नपरेको बताउँछन् । बिहानबाट काममा आए पनि आव’तजावत तथा व्यपार नहुँदा कामै नपाए’को उनकाे भनाइ छ ।’
उनी अहिले तरकारी ब’जारमा गर्ने मज’दुरीको काम लगभग ठप्प भएको बताउँछन् । पहिले दैनिक हजार १२ सयजति कमाइ हुनेमा अहिले दिनभरि गर्दा ४-५ सयसम्म बल्ल’तल्ल हुने उनको भनाइ छ ।उनले सुनाए, ‘पहिला’जस्तो छैन । कसैको घरमा खाने चामल छैन । कसैकोमा रुम भाडा ति’र्ने पैसा छैन । एक’दमै गाह्रो छ ।’
‘भाडा छुट पा’इएन’
त्यस्तै अर्का मजदुर अहिलेको कमाइ’ले कोठा’भाडा ति’र्नै पनि नपुग्ने बता’उँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोठा भाडा नै ८-९ हजार पर्छ । यहाँको कमाइले त्यो तिर्न पनि गाह्रो छ । घरबेटीले छुट दिन मान्दैन । आफू पा’लिनु पनि छ ।’
पोहोरको लक’डाउनमा पनि ३ महिनापछि आएर भाडा ति’रेको उनले बताए । पोहोरको जस्तो नहोस् भनेर अहिले ज्या’न ध’रापमा पारेर भए पनि बाध्यता’ले काम गरिरहेको उनले सुनाए ।
‘प्रह’रीले भा’टा हान्छ, सरकार ! हामी के गरी खाने ?’
प्युठान’बाट आएर मजदुरी गरिरहेका मानबहादुर सुनारकाे पनि पी’डा उस्तै छ । कालिमाटीमा मज’दुरी गर्न थालेको १५ वर्ष भएको उनी सुनाउँछन् । पोहोरको लकडा’उनमा राम्रै कमाइ भएको भए पनि अहिले भने गा’ह्रो भएको उनकाे अनुभव छ । बिहान ५ बजे उठेर आउँदा कालिमाटी गेटमा प्र\_हरीले छि’र्नै नदिने गरेकाे कारण अहिले अत्यन्तै सम’स्या परेको उनी गु’नासो गर्छन् ।
मानबहा’दुर भन्छन्, ‘म जस्तो मज’दुरी गरेर छोराछोरी पाल्दै आएकोलाई प्रहरीले गेटबाट छिर्नै दिँदैन । हामी कसरी गर्ने यहाँ काम ? गरेनौँ भने हाम्रा बालबा’लिका कसरी पाल्ने ? घरमा जाँदा बच्चाहरुले ५ रुपैयाँ, दश रुपैयाँ भन्दै माग्छ’न् । पैसा भए पो दिनु, नभए कसरी दिने ?’
हिजो एक शब्द नबो’ली काम छोडेर निस्किएको बताउँदै उनले कामका लागि आउँदा प्रहरीले नै एक शब्द नबोली भाटाले हान्ने गर्दा मन क’टक्क हुने तीताे अनुभव सुनाए । प्रह’रीले भोलि’बाट एकछिन पनि नआउनु भन्दै लखे’ट्ने गरेको उनी सुनाउँछन् ।
यहाँ नआ’एर हामी कहाँ जाने ? आफू कसरी पालिने, श्रीमती र छोराछोरी कसरी पाल्ने ?’ उनी रोदन पोख्छन्, ‘हामीले काम गरेनौं भने हाम्रो परिवार के सर’कारले पालिदिन्छ ? हामी काममा आउछौं । काम गरेर भए पनि बच्चाहरुलालाई पाल्छौं । तर गेटभित्र आउँदा हामीलाई प्र’हरीले एकै’चोटि भा’टा हान्छ । टाउको फु’टाइदिन्छ । उसको मन लाग्दा जहाँ पनि हान्दिन्छ । सरकार:ले उसलाई हान्नु भनेको हो र ?’
हिजो पनि काम छोडेर जाँदै गर्दा गेटमा तु’रुन्त बाहिर गइहाल भन्दै भाटा हा’नेको उनले सुनाए । ‘पुलिसले तुरुन्त गइहाल, अबबाट यहाँ नआइज भन्दै भाटा हान्छ । यहाँ नआएर हामीले कहाँ गएर खाने, कहाँ जाने ? यो सरकारले हामीलाई बुझि’दिनु प’र्यो,’ उनी भन्छन् ।
सरकार’ले मजदुर कसरी बाँचिरहेका छन्, कसरी बालबच्चा पालिरहेका छन् भन्नेबारे चासाे नै नलि’एकाे उनकाे भनाइ छ । अघिल्लाे दिन प्रह’रीकाे भाटा छालेर जम्मा ३ सय ‘ कमाइ भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘घरमा परि’वारले पनि खै पैसा भन्दै माग्छन्, घरबेटीले पनि खै भाडा भन्दै मागेर हैरा’नी दिएकाे छ ।’ न्युज २४ बाट
Prevयती ठुलो भए कृष्ण र रूपाको छोरा, कृष्णले बनाए यस्तो भिडियो ! (भिडियो सहित)
Nextघिरौला खानुका यति धेरै जान्नैपर्ने फाइदाहरु ।
थाइल्यान्डबाट राजपरिवारले पठाएकाे स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्यो ।
गुर्जो खानुको यति फाइदै फाइदा, खाने विधि सहित हेर्नु-होस ।(भिडियो)